घरको बाथरूम सुन्दर बन्न डिजाइन गर्नुहोस् र प्रत्येक दिन नुहाउने ठाउँमा राम्रो मुड गर्नुहोस्
घर / ब्लग / घरको बाथरूम सुन्दर बन्न डिजाइन गर्नुहोस् र प्रत्येक दिन नुहाउने ठाउँमा राम्रो मुड गर्नुहोस्
2021 / 01 / 11 वर्गीकरणब्लग 2766 0
बाथरूम बिजनेस स्कूल २०२०-११-२2020
दैनिक प्रयोगको लागि अधिक बारम्बार प्रयोग हुने ठाउँको रूपमा बाथरूम। डिजाईनमा, यदि तपाईले राम्रो समयको रूपमा हेरिरहनु भएन भने, तपाई धेरै अप्ठ्यारो पनि महसुस गर्नुहुनेछ। त्यसोभए कसरी बाथरूमलाई अझ सुन्दर हुने? मँ आज तपाईलाई केहि उच्च मूल्यको बाथरूम डिजाइन केस बाँड्न चाहन्छु, मलाई आशा छ तपाईले दिनको नुहाउन पनि राम्रो मुड पाउन सक्नुहुन्छ।
खैरो टोन डिजाइन हालका वर्षहरूमा धेरै लोकप्रिय छ। घरको बाथरूम अब खैरो टोन मैट टाईलको साथ प्रशस्त गर्न सकिन्छ, सेतो र कालो सफा सामान र सेनेटरी वेयरको साथ, जवान र उदार देखिन्छ।
तपाईं टोनरको रूपमा खैरो ठाउँमा काठ, गुलाबी, आदि पनि थप्न सक्नुहुन्छ सामान्य सेतो प्रणालीबाट धेरै मधुरो लाग्नबाट जोगिन, विवरणहरूले राम्रो काम गर्दा बाथरूम बढी सुन्दर हुन सक्छ।
कालो र सेतो डिजाइन को संयोजन आधुनिक शैली, न्यूनतम शैली को लागी धेरै उपयुक्त छ, र ग्राउंड पेभिंग हेक्सागोनल टाइल बाथरूम मा अन्तरिक्ष को दृश्य भावना विस्तार गर्न को लागी, ताकि बाथरूम अधिक विशाल देखिन्छ।
मार्बल टाइलहरू प्रायः घरमालिकहरूको छनौट हुन्, र मार्बल टाईलहरू पनि विभिन्न ढाँचा र शेडहरूमा आउँदछन्, जुन तपाईंको प्राथमिकता अनुसार निर्णय गर्न सकिन्छ। बाथरूमलाई बढी वायुमण्डलीय बनाउनको लागि धातु तत्व पनि थप्न सकिन्छ।
केहि रचनात्मक टाइलहरू स्ट p्ग्रग फडिंगले बाथरूमलाई अझ रमाईलो बनाउन सक्छ, तर धेरै अव्यवस्थित नदेखिनको लागि, टोनको छनोट एकदम महत्त्वपूर्ण छ।
सरल र उदार बाथरूममा एक्सटेन्टको रूपमा रमाईलो फ्लोरल टाइलहरू थप्नुहोस्। नीलो रed्गको फूलको टाईलहरू सहित नुहाउने ठाउँ र भुइँ राख्नु बाथरूम पनि बढी साहित्यिक देखिन्छ।
घरको साधारण बाथरूमले बाथरूमको ढोका बाहिर सि the्क बनाउन छनौट गर्न सक्दछ, ताकि यो दैनिक प्रयोगको लागि सजिलो होस्। र सिंक स्वतन्त्र रूपमा बाथरूम बाहिर, तर पनि सजावटी प्रभाव खेल्नुहोस्।
बाथरूम क्षेत्र पर्याप्त छ, अब तपाईं तीन अलग डिजाइन गर्न सक्नुहुन्छ। शौचालय अलग गर्नुहोस्, सिink्क र नुहाउने ठाउँ, र बाथरूमलाई अझ सुन्दर बनाउनको लागि राम्रो विभाजन थप्नुहोस्।
यी बाथरूम डिजाइन केसहरूमा हेरेपछि, के तपाईंले आफ्नो मनपर्ने फेला पार्नुहुनेछ? मलाई लाग्छ कि बाथरूमको डिजाइन घरको शैली अनुसार निर्धारित गर्न सकिन्छ, उदाहरणका लागि, बाथरूमको खरानी टोन न्यूनतम र स्कान्डिनेभियाई शैलीका लागि एकदम उपयुक्त छ। मार्बल फुटपाथको डिजाईन आधुनिक र युरोपेली शैलीका लागि उपयुक्त छ। शैली अनुसरण गर्नुहोस् बाथरूम पनि अकस्मात देखिने छैन।
अघिल्लो :: कसरी गर्ने यदि शावर फेरि ब्लक भयो भने? हतार नगर! यो भिजाउन प्रयोग गर्नुहोस् ... एक चमत्कार! तपाईंको ग्राहकलाई बताउन तुरुन्त गर्नुहोस्! अर्को: जाडो यहाँ छ! के म एक थर्मोस्टेटिक स्नान किन्नु पर्छ? विशेषज्ञहरु सुन्नुहोस्, आश्चर्य छैन यति धेरै मानिस परिवर्तन गर्न चाहन्छन् !!!
जापानी बाथरूममा तौलिया क्याबिनेट १० सेन्टिमिटर पातलो छ, स्टोरेज राम्रोसँग
2021 / 01 / 16 2486
यदि बाथरूम Squ स्क्वायर मीटर भन्दा कम छ भने पनि, भिजेको र सुख्खा विभाजन N हो ...
2021 / 01 / 15 1693
जाडो यहाँ छ! के म एक थर्मोस्टेटिक स्नान किन्नु पर्छ? विशेषज्ञहरु सुन्नुहोस्, होईन ...
2021 / 01 / 15 1840
कसरी गर्ने यदि शावर फेरि ब्लक भयो भने? हतार नगर! सोख्न प्रयोग गर्नुहोस् ... ...
2021 / 01 / 11 2121
बाथरूम नवीकरण गर्न सकिन्छ !!! बाथरूम मान्छे थाहा छ
2021 / 01 / 11 2451
माफ गर्नुहोस्, चर्पीमा यी समस्याहरू छन्, गुणवत्ता समस्या होइन!
2020 / 12 / 12 6134
नमस्कार!कृपया साइन इन गर्नुहोस्
जवाफ रद्द गर्न क्लिक गर्नुहोस्
उपनाम ： ईमेल ：
जवाफ रद्द गर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्।
हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोस युएसए ठेगाना: THE ग्रेन स्टे ए, केन्ट, डोभर सिटी, डे, १ 8 19901 ०१। संयुक्त राज्य अमेरिका टेलिफोन: 3476134901 इ-मेल: বিক্রয়@wowowfaucet.com